China Soft PVC mveliso USB kunye nabenzi | SJJ
Ngexesha langoku, wonke umntu une-USB enye okanye ngaphezulu yokugcina ulwazi okanye ukuhambisa idatha kwiikhompyuter ezahlukeneyo.
Ngexesha lale mihla, wonke umntu une-USB enye okanye ngaphezulu yokugcina ulwazi okanye ukuhambisa idatha kwiikhompyuter ezahlukeneyo. Inkqubo ye-I-PVC ye-PVC ethambileyo inokukhusela i Umqhubi we-USBkakuhle kakhulu ngesembozo sayo esithambileyo nesizinzileyo sePVC. Akukho sidingo sokukhathazeka malungaUmqhubi we-USByaphulwe xa isiwa. Isimbozo esithambileyo sePVC sinokwenziwa kwiimilo ezahlukeneyo ezithandekayo okanye ukudityaniswa kombala ohlukileyo. Iimpawu ezipheleleyo ze-3D zenza ukuba uyilo luzele kwaye lube sisityebi. Oku kuzicacisa ngokupheleleyo izimvo zomyili kunye nemiphefumlo enzulu. Iziqhotyoshelweyo ezahlukeneyo ezinjengeeringi zitshixo, imitya, izitshixo, iibhola zemixokelelwane ngaphandle komqhubi we-USB ukufezekisa imisebenzi emininzi yeuthambile PVC umqhubi we-USBs. Xa usebenzisa ithambileIPVC USBUyonwabele ixesha elimnandi lobomi ngezinto ezizodwa.
Ikholamu ye uthambile PVC umqhubi we-USBukusuka kwi-2 GB ukuya kwi-256 GB, iyahlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo ngeemfuno zekholamu ezincinci okanye ezinkulu. Amaxabiso ayaxoxisana ngokweemfuno zakho ezineenkcukacha.
Izixhobo: Umqhubi we-PVC + we-USB
Motifs: Die Struck, 2D okanye 3D, macala
Imibala: Unokutshatisa imibala yePMS
Ukupakisha: Ukupakisha iblister, okanye landela imiyalelo yakho.
MOQ: iiPC ezili-100 kuyilo ngalunye
Egqithileyo Isinyithi siyilwe Iimbasa ze-Acrylic
Ukuqhutywa kweFlash Flash yesiqhelo
Umqhubi we-PVC USB
uthambile PVC umqhubi we-USB
I-USB Flash Drive
Ii-Coasters ezivuthayo ze-USB